RAHARAHA APOLLO 21: Voasazy 20 taona sy 10 taona asa an-terivozona i Paul Rafanoharana sy François Marc Philippe – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:52
François Marc Philippe (Havia) sy Paul Rafanoharana (Havanana)
Accueil/Fanadihadiana Manokana/RAHARAHA APOLLO 21: Voasazy 20 taona sy 10 taona asa an-terivozona i Paul Rafanoharana sy François Marc Philippe
Nivoaka omaly zoma 17 desambra 2021 ny Didim-pitsarana momba ilay Raharaha fikasana hifofo ny ain’ny Filoham-pirenena, na antsoina ihany koa hoe “Apollo21”. Raha toa ka saika nohafahana avokoa ireo zandary voasaringotra tamin’ity raharaha ity, dia voaheloka asa an-terivozona 20 taona kosa i Paul Rafanoharana izay sokajina ho atidoha, ary 10 taona asa an-terivozona kosa ho an’i François Marc Philippe sy Razafindrakoto Aina Marie, ilay mpiasan’ny Banky Foibe .
Lucien R. 18 décembre 2021
Naharitra andro maro ny fitsarana ireo voampanga.
Rehefa avy nohenoina teo anoloan’ny Fitsarana efa roa herinandro ireo voampanga rehetra tao anatin’ny raharaha Apollo 21, dia nivoaka omaly tokony ho tamin’ny mitatao vovonana ny Didy avy amin’ny fitsarana ady heloka bevava. Araka ny didy nivoaka, voaheloka 20 taona asa an-terivozona i Paul Rafanoharana. Samy voasazy hanao asa an-terivozona 10 taona avy kosa i François Marc philippe, teratasy frantsay sy Razafindrakoto Aina Marie, ilay mpiasan’ny Banky Foibe. 5 taona asa an-terivozona ho an’Andrianandrianina Voahangiarisoa Nomenjanahary, vadin’i Paul Rafanoharana. Ary samy nohafahana noho ny fisalasalana i Razakarimanana Ferdinand sy Brigitte Rosette. Samy dimy taona an-tranomaizina sazy mihantona kosa no azon’I Andriazanakolona William Yvon antsoina hoe Sareraka sy Ramahatra Victor. Saika nohafahana madiodio kosa Rakotondramanana Alain José, Rakotoarimanana Nomenjanahary Maminiaina Patrice, Diary Rivohasina Angelot Gaston, Vanomila Bien Aimé, Harisoa Princy, Diambelou Euclide, Andria Tiana Michel, Ravelonarivo Jocelyn, Totoarisoa, Rakotoarison Alphonse Anthony, Rapo Nicholson Edouard, Dabaka Jean Michel. Ireto farany izay ahitana ireo zandary sy manamboninahitra Jeneraly voarohirohy tamin’ity raharaha ity. Izany hoe, nohafahana madiodio avokoa ireo zandary rehetra voarohirohy.
Fisamborana ny Jolay lasa teo
Raha tsiahivina ny tantara, ny talata 20 jolay 2021 no namantaran’ny rehetra ny fisamborana natao tamin’ireo olona miisa enina, izay voarohirohy sy voampanga amin’ny fanohintohinana filaminam-bahoaka, tamin’ny teti-dratsy fikasana hamonoana ny Filoha Rajoelina Andry, tamin’ny alalan’ny Mpampanoa lalàna ambony. Ny teo anivon’ny Polisim-pirenena no nanatanteraka ny fisamborana manontolo azy ireo, ary efa nandeha ny fanadihadiana. Nitohy ny famotorana. Nivoaka tsikelikely ny vaovao manodidina ny raharaha. Ny ampaham-baovao mivoaka avy tamina loharanom-baovao azo antoka akaiky ny famotorana no nahafantarana fa nifandray tamina orinasam-pitrandrahana solika ny iray tamin’ireo atidoha, izay tsy iza fa ingahy Paul Rafanoharana, ary nanomana rafitra famatsiam-bola ny teti-dratsy mihitsy, ka tafakatra 10 tapitrisa Euro izany.
Ireo antontan-taratasy hita tao an-tokantranon’i Paul Rafanoharana no nahitana izany. Tsiahivina, fa nandritra ny fisavana ny tranony teny Ambohitrarahaba dia efa nahitana 250 000 Euro nozarazaraina tanatina valizy efatra, tao aminy. Niaiky ho nandray io volabe io avy amina olona tsy fantatra ny vadiny, nandritra ny fisavana, raha ny ampahana horonantsary niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera Facebook. Ny vadin’i Paul Rafanoharana, izay notànan’ny mpitandro filaminana ihany koa.
Niakatra fampanoavana ny fiandohan’ny Aogositra
Nihazakazaka ny toe-draharaha taorian’izay, ny Alahady 01 Aogositra 2021, nisy indray fanambarana nataon’ny Tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambony, izay nanambara fa tafiakatra 21 ireo olona nohenoina sy nanaovana fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity. Miaramila sy Zandary am-perinasa ny 12 amin’ireo olona 21 ireo, izay ahitana Jeneraly miisa dimy, Manamboninahitra lefitra miisa 5, ary Kapiteny miisa 2. Miaramila sy zandary efa nisotro ronono, ahitana teratany vahiny sy Malagasy, kosa ny efatra tamin’ireo nohenoina, ary sivily ny dimy sisa.
Taorian’ny fiakarana fampanoavana izay naharitra ora maro, fantatra fa olona telo tamin’ireo voarohirohy no nalefa eny Tsiafahy ny andron’ny 04 Aogositra 2021. Anisan’izany ingahy Paul Rafanoharana, teratany malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay, ary i Phillipe Marc François, kolonely misotro ronono frantsay, izay heverina fa atidoha nikotrika ny teti-dratsy. Nampiarahina tamin’izy ireo ihany koa ny mpiasa iray teo anivon’ny Banky foiben’i Madagasikara. Ankoatra ireo telo nalefa teny Tsiafahy, nisy tamin’ireo voarohirohy ihany koa no nalefa eny amin’ny Fonjan’Arivonimamo Imerintsiatosika. Tafiditra ao anatin’izany ny Praiminisitra teo aloha, tamin’ny Fitondran’ny Filoha teo aloha Didier Ratsiraka, Victor Ramahatra. Eo koa ihany ny jeneraly efa misotro ronono iray, izay isan’ny nirotsaka hofidina filoham-pirenena tamin’ny 2006, Ferdinand Razakarimanana, ary ny komandin’ny “groupe de sécurité et d’interventions spéciales” (GSIS) eo anivon’ny zandarimaria (E.D). Tetsy ankilany, anisany efa niatrika ny fampanoavana ny andron’ny 04 Aogositra 2021 ihany koa ny ampahany tamin’ireo vehivavy voarohirohy tamin’ity raharaha ity. Fantatra taorian’ny fanadihadiana, noho izany, fa nalefa any Manjakandriana ny iray tamin’ireo vehivavy ireo, izay tsy hafa fa ny vadin’i Paul Rafanoharana ihany. Ny iray hafa kosa nalefa eny amin’ny Hopitaly noho ny tsy fahasalamany, araka ny voalaza.
Nanomboka ny 06 desambra 2021 ny Fitsarana
Nahatratra 20 mianadahy ireo voampanga niakatra fitsarana nanomboka ny 06 Desambra 2021 lasa teo, tamin’ny « Raharaha Apollo 21 ». Nisantatra ny fiarovantena teo anatrehan’ny Fitsarana i Paul Rafanoharana, izay sokajina ho atidoha. Nisesisesy nanaraka azy taorian’izay ireo voampanga rehetra. Samy nampiasaina avokoa na ny teny malagasy na ny teny frantsay tamin’ny fotoana nihainoana ireo mizaka ny zom-pirenena frantsay. Nifandimby nanao ny fiarovana ihany koa ireo mpisolovava ny voampanga. Ary omaly 17 Desambra 2021 no nivoaka ny didy.
Niaiky ny fikasana hanongam-panjakana i Paul Rafanoharana…
Raha hiverenana ny fiampangana an’i Paul Rafanoharana, dia mifototra amin’ny fikasana hamono hahafaty ny Filoham-pirenena, fandravana ny Governemanta am-perinasa, ary fihazonana tsy ara-dalàna fitaovam-piadiana. Ireo fiampangana ireo izay niainga tamin’ny fahitana ny taratasy izay mirakitra ny antsipiriany momba ny tetika Apollo 21. Tamin’ny ankapobeny, tsy nisy nolavin’i Paul Rafanoharana ireo voasoratra rehetra tao anatin’ny taratasy nosoratany, nandritra ny fihainoana azy teo anoloan’ny Fitsarana. Isan’izany ny taratasy mirakitra ny tetibola ilaina amin’ity raharaha ity. Nambarany fa eritreritra fotsiny ihany ny voarakitra rehetra ao anatin’izany fa tsy mbola nisy drafitra fanatanterahana, toy ny daty sy ny fotoana hanaovana izany. Na dia niezaka nandray tsirairay ireo teboka nangataham-panazavana tamin’I Paul Rafanoharana aza ireo mpitsara, dia saika naravon’ity voampanga ity amin’ny hoe eritreritra fotsiny ihany izany, fa tsy mbola drafitra maty paika.
Tsy hamono ny Filohan’ny Repoblika?
Na izany aza, fanazavana nentin’i Paul Rafanoharana teo anatrehan’ny Fitsarana ny hoe tsy ny Filohan’ny Repoblika velively no nokasaina ho vonoina tao anatin’ny raharaha Apollo 21. Fanadiovana ireo vondrona mafia manodidina ny Filoha Andry Rajoelina, izay manelingelina azy tsy hahafahany miasa ankalalahana, kosa no noheveriny ho atao. Mikasika ny fitaovam-piadiana izay hita tao an-tranony kosa indray, nilaza izy fa tsy porofo anamarinana fikasana hanongam-panjakana ny fisiana fusil à pompe tao an-tranony. Ary momba ilay vola 900 tapitrisa ariary izay tratra tao an-tranony, dia nambarany fa vola saika hividianana volamena iny.
Dingana efatra tao amin’ny Apollo 21
Eo anatrehan’ireo rehetra, niezaka niaro tena hatrany ingahy Paul Rafanoharana. Tsara ho fantatra anefa fa tao anatin’ny taratasy mirakitra ny tetibola mety ho ilaina hanatanterahana ny raharaha Apollo 21, dia efa misy ireo dingana efatra hanaovana ny hetsika rehetra. Dingana voalohany ny fanomanana ny fandraisana ny fahefana, izay nilana tetibola mitentina 1,5 tapitrisa euros mahery, hividianana fitaovam-piadiana sy fitaovana ara-informatika ho ana andiana “commando” miisa 5 hisandrahaka isam-paritany avy any ivelany. Manomboka amin’ny fandraisana ny vola miampy 20 andro eo no nikasana hanatanteraha izany. Dingana faharoa kosa ny famonoana olom-panjakana 5 eto amin’ny firenena. Dingana fahatelo ny fanagejana ireo Andrimpanjakana (fiadidiana ny Repoblika, primatiora, fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, antenimiera sy ny tafika) haino amam-jerim-panjakana sy toerana ary rafitra stratejika misy eto Madagasikara, ary ny dingana farany dia ny firosoana amin’ny fanatanterahana ireo ekipa nofantenana.
Tsara marihina fa nandritra ny fotoam-pitsarana ity raharaha ity izay efa naharitra roa herinandro latsaka, dia nanizingizina hatrany i Paul Rafanoharana fa tsy nisy olon-kafa nanampy azy tamin’ny fananganana ny Apollo 21 fa izy tenany ihany. Toa te hanala ireo voampanga tafiditra tao anatin’ny raharaha ny tenany. Ny porofo teo anatrehan’ny Fitsarana kosa anefa no tsy nahafahan’ireo voampanga sasantsasany niala, ka ireo voaheloka ireo ihany. Milaza ampiakatra ny raharaha eo amin’ny fitsarana fandravana didy ireo mpisolovava ny voampanga.
FANDANIANA NY PL 001/2020: “Tsy nisy fandikana Lalàmpanorenana mihitsy”
FAMPANDRIAMPAHALEMANA: Notokanan’ny Filoha ny « Base Opérationnelle avancée » ao Iakora
FIVOAHANA AMIN’NY LALAM-PIRENENA : Hentitra amin’ny fampanarahan-dalàna ny mpitandro filaminana
TIKO ANDRANOMANELATRA: Nakatona noho ny tsy fanarahan-dalàna
RAHARAHA VOLAMENA 49KG : Hihazo an’i Kaomôro ny Delegasiona malagasy anio